အသက် ၃၀ - နောက်ဆုံးတော့၊ နှောင့်နှေးသုက်လွှတ် fixed ။ NoFap ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် - Porn On Your Brain
အသက် ၃၀ - နောက်ဆုံးရောက်လာတယ်။ နှောင့်နှေးသုက်လွှတ် fixed ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် NoFap
ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါ (30M) ပြီးခဲ့သည့်ညဥ့် PIV စဉ်အတွင်းလာ၏။ ၄၇ ရက်နှင့် porn မကြည့်ဘဲ ၃၂ ရက်အပြီး MO ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပျက်လာလိမ့်မယ်လို့မသေချာတဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ DE သည် NoFap လုပ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါကစိတ်ရောဂါခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါဒီမိန်းကလေးနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့ပြီးနေ့ ၃၀ မှာပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါကအရမ်းခံစားရတယ်၊ ငါကပိုပြီးတော့အကင်းပါးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမပြီးသေးဘူး သူမဤကဲ့သို့သောသူနှင့်တစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးသောကြောင့်သူမအားအနည်းငယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ညက ၇ မိနစ်ခန့်မျှမကြာခဲ့ပါ။ အရမ်းမိုက်တယ်။
အကြံ - အကယ်၍ သင်သည် DE ကြောင့်ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်အကြံပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ PMO ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာမင်းကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဘယ်လိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်တာကိုဘယ်လောက်နှောင့်နှေးနေတယ်ဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားပါ။ အချိန်ကသာဖြေရှင်းနိုင်သည်။ အဲဒါကျိုးနပ်ပါတယ်။
LINK - နောက်ဆုံးအနေနဲ့တို့သည် လာ. !!! DE fixed ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် NoFap